Furu efu gị smartphone kọntaktị? Mmadụ na mberede ehichapụ kọntaktị na ndị ọzọ na data site na ekwentị gị? Echegbula! E nwere ọtụtụ mfe na-eji software na ngwa ga-enyere gị ngwa ngwa ndabere kọntaktị nkọwa na ndị ọzọ na data na na-echekwara na gị iPhone. Nkà na ụzụ mere ndụ anyị adaba ma n'otu oge ọ dị ezigbo mkpa ịnọgide na-enwe a ndabere nke ekwentị gị anọgide. Tupu ị wụnye ọ bụla nweta nkwalite na gị smartphone, jide n'aka na ị nwere nkwado ndabere na mpaghara nke ihe niile. Ọ dịghị mgbe na-afụ ụfụ na-kwadebere tupu oge eruo, mgbe niile na ọ bụ banyere gị bara uru data.
Ka maara banyere ngwọta ndị dị iche bụ maka gị Apple, Android na Blackberry ngwaọrụ nke nwere ike inyere gị ike ndabere kọntaktị gị na ndị ọzọ na ekwentị data dị mfe na ụzọ dị mfe.
2 NQ Ndi ana-akpo mmekọrịta
5 N'ihi na iContacts
7 Ndị ọzọ ngwọta na-ndabere Blackberry kọntaktị
IntouchApp bụ oké ngwa na-bụ nnọọ mfe iji. Ọ bụ ihe dị mfe kọntaktị njikwa na bụ dakọtara na dị iche iche nyiwe (iOS, Android, Blackberry OS na Java ngwaọrụ). Ọ bụ ibu bara uru n'ihi na ndị mmadụ na otutu ngwaọrụ. InTouchApp pushes ozi emelitere site na otu nke kọntaktị gị ka ndị ọzọ bụrụhaala na ha onwe ha kwa na-eji ngwa. Ozugbo ị dezie a na kọntaktị na ngwaọrụ gị, IntouchApp na-akpaghị aka syncs ndị ozi na ngwaọrụ ndị ọzọ na nke a bụ ndị dị otú ahụ a oké mma.
• Ò Kwekọrọ n'Ozizi na otutu nyiwe.
• Enweghị nsogbu mmekọrịta n'etiti dị iche iche ngwaọrụ.
• atụghị Anya njehie kọrọ mgbe ụfọdụ.
NQ Ndi ana-akpo mmekọrịta awade ngwọta nyefee, ndabere na weghachite kọntaktsị na a hassle-free ụzọ. The ngwa bụ dakọtara na dị iche iche sistem dị ka iOS, Android, blackberry na Nokia. Ihe niile ị chọrọ ime bụ ike a free akaụntụ na NQ otú ahụ ngwa nwere ike echekwa gị kọntaktsị na NQ ígwé ojii. Ị nwere ike mgbe ahụ mfe jikwaa gị kọntaktị na ngwaọrụ ọzọ jikọtara ya na ígwé ojii.
• Multiple- nyiwe ndakọrịta
• Online management nke Ndi ana-akpo
•-akwado naanị ọhụrụ version nke iOS.
The ọrụ ukwuu nwere ike ikwu a ngwa. Na a ngwa, ị nwere ike mfe dezie, jikwaa na ịkọrọ gị kọntaktsị na gị iPhone na Gmail akaụntụ. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị keukwu kọntaktị na otu management software dị maka iPhones.
• Ò Kwekọrọ n'Ozizi naanị na iPhone na Gmail.
Phoneswappr ugbu a na-akwado iOS, Android na Windows igwe. Ọ bụ a ala ngwa bulite kọntaktị gị ka ígwé ojii. Bulite kọntaktị, a PIN e nyere nke a chọrọ iji decrypt data mgbe na-eme ka a nyefe nke kọntaktị na nke abụọ ngwaọrụ. The uploaded na kọntaktị na PIN expires mgbe ụbọchị asaa, na data Nwela ehichapụ si PhoneSwappr nkesa.
• Secure na mma-transfer usoro
• Data Nwela na-akpaghị aka na-ehichapụ na ngwa nhichapụ.
A na ngwa na-enyefe, ndabere na weghachite kọntaktị gị na a mgbata nke a bọtịnụ. Ndi ana-akpo ndabere & Nyefee Pro Detuo gị dum kọntaktị na ndepụta n'ime a ùkwù otú i nwere ike iziga ya na onwe gị ma ọ bụ enyi site na e-mail. The kọntaktị na-echekwa na a Vcard format na i nwere ike nyefee ma ọ bụ mbubata kọntaktị gị na ekwentị, PC ma ọ bụ n'oge ọ bụla na-enweghị Mac hassle.
• Unlimited ndabere
• Na-ngwa mgbasa ozi na-a Gbanyụọ ka onye ọrụ.
Wondershare MobileTrans Bụ 1-pịa ekwentị ndabere ngwa. Ngwá ọrụ a na-ahapụ gị nkwado ndabere na mpaghara weghachiri ekwentị data effortlessly. Ị nwere ike detuo kọntaktị, SMS, photos, music na ndị ọzọ si gam akporo, Symbian na iOS ngwaọrụ gị na kọmputa. Ọ na-Nyefe kọntaktị, oku na ndekọ, kalenda, ederede ozi, photos, music, video na ngwa n'etiti iPhone, Android, Nokia (Symbian) igwe na otu onye dị mfe click.
Step1: Wụnye MobileTrans na kọmputa gị na-agba ọsọ mbụ, na-agba ọsọ mgbe gị iOS, Android, ma ọ bụ Nokia jikọọ ekwentị na kọmputa na eriri USB.
Step2: Na Home NchNhr, họrọ Back Up ekwentị gị nhọrọ. Ego niile data na ị chọrọ nkwado ndabere na mpaghara pịa Malite Detuo. The MobileTrans ga-amalite ndabere họrọ ọdịnaya na kọmputa. Ị nwere ike wee chekwaa ndabere data na gị chọrọ ọnọdụ na weghachi ya na ngwaọrụ ndị ọzọ mgbe ọ bụla ị chọrọ ka ha.
Ndị ọzọ ngwọta na-ndabere Blackberry kọntaktị
1. Blackberry Desktọpụ Manager 6.0
Blackberry Desktọpụ Manager 6.0 maka PC bụ ewu ewu n'etiti Blackberry ọrụ. Na Blackberry Desktọpụ Manager, gị nwa Berry smartphone ndabere gị data dị ka gị kọntaktị, ozi, Kalinda, Profaịlụ Ntọala, wdg Bilie gị faịlụ kemfe na ihe ịga nke ọma mwube gị Blackberry ID na Blackberry App World.
• Ngwa na-adịghị kwadoo elu
2. My Ndi ana-akpo ndabere
My Ndi ana-akpo ndabere bụ ihe ịtụnanya na ngwa na-enye gị ohere iji ndabere, òkè na weghachi gị niile Blackberry kọntaktị. Ihe niile ị chọrọ ime bụ iji wụnye a ngwa na gị blackberry ngwaọrụ wee pịa on the'Backup 'button. Ngwá ọrụ a ga-ahụ na-akpaghị aka ịzọpụta kọntaktị gị na ebe nchekwa ekwentị gị / SD kaadị. Nke a bụ kacha ụzọ nkwado ndabere na mpaghara weghachiri kọntaktị gị niile site na ekwentị gị na-enweghị mkpa a kọmputa ma ọ bụ mmekọrịta.
• Mfe iji interface
• Otu click azụ elu
• Ọ dịghị onye
Naghachi onwe gị data gị blackberry na PhoneMinor mfe. Ị nwere ike naghachi Ndi ana-akpo, SMS ozi, ozi ịntanetị, Kalinda, Photos, Videos na ndị ọzọ na-azọpụta gị data na-ewu ewu faịlụ formats like.XLS, .CSV na .VCF (vCard). Ihe oké ọnụ na mfe ngwá ọrụ maka-ewepụta gị data site na ekwentị gị backups.
• mkpọka mgbe ụfọdụ.
Top 10 SMS scheduler Iji nyere gị aka Send ozi ederede Mgbe e mesịrị
Otu Pịa na nkwado ma weghachite Ma iOS na Android SMS
100 funniest Ọnọdụ mmelite
> Resource> Top List> Top 6 Ndi ana-akpo ndabere Solutions maka ekwentị gị